Fampiharana ny miralenta: tetikasa mitentina 400 000 euros ho an’ny rugby | NewsMada
Nampahafantarina, omaly tetsy amin’ny IFM Analakely, ny fanombohan’ilay tetikasa fampihenana ny tsy fitoviana eo amin’ny lahy sy vavy, amin’ny alalan’ny rugby, mitarika amin’ny fampisondrotana sy fampivoarana, eto Madagasikara”. Tetikasa mitentina 400.000 euros ka ny 330 000 euros, avy amin’ny masoivohon’i Frantsa eto Madagasikara, angady nananana sy vy nahitana izany. Marihina fa hiarahany miasa, amin’ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena, ny Malagasy rugby ary ny Akademiam-pirenen’ny fanatanjahantena (ANS), sy ny fikambanana Terres en Mêlées izy ity. Samy nanoritsoritra ny maha zava-dehibe ny tetikasa ireo nandaha-teny: ny masoivoho frantsay eto Madagasikara, Rtoa Véronique Voulan sy ny filohan’ny Malagasy Rugby, Rakotomalala Marcel. Ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny fanatanjahantena malagasy, Ralaivao Lovatiako, nisolo tena ny minisitra Tinoka Roberto.
Singa fototra telo
Hahatrarana ny tanjona, noraisina ho fitaovam-panabeazana ny fanatanjahantena, indrindra fa ny rugby. Hiorina amin’ny singa fototra telo izy ity: ny fanofanana ka hanamafisana ny fahaiza-manao sy ny fanomezam-pahalalana ireo mpampiofana. Eo koa ny fiofanana voalohany, mandritra ny roa taona, ho an’ny mpampianatra fanatanjahantena, izay 60 % ny vehivavy sy ny an’ireo mpanazatra, miaraka amin’ny fanampian’ireo mpampiofana sy manampahaizana frantsay, eo am-panombohana.
Eo koa ny fanamafisana ny fahaiza-manao sy fampirisihana ny lehilahy sy ny vehivavy, miankina amin’ireo ivontoeram-piofanana dimy an’ny fikambanana Terre en mêlées. Eo koa ny fanatanjahantena sy ireo mpiara-miombon’antoka, amin’ny alalan’ny fanatontosana semineram-paritra, miaraka amin’ireo kapitenin’ny ekipa isan-tokony, izay vehivavy ny ankamaroany avy amin’ireo taranja samy hafa hahalan’izy ireo ny karazam-panatanjahantena.
Nanatrika ity lanonana ity sy nanome ny heviny mikasika ny tetikasa ny talen’ny fanatanjahantena sy ny tale jeneralin’ny ANS.